Free BF Scalper EA - Best Forex EA | Expert Advisors | FX Robots
Aogositra 8, 2020
HomeFree Forex EAsFree BF Scalper EA
Ny lojika ao ambadiky ny maimaimpoana BF Scalper EA Tsotra nefa mahomby - ampiasain'ny EA breakouts ny Bollinger Bands ho famantarana sy fidirana.
Ny sandan'ny fahaverezan'ny fihenan'ny fisainana dia miovaova eo amin'ny 20 sy 60 anao.
Azonao ampiasaina kely ny TP voafaritra eo anelanelan'ny 4-8 ianao na mamela ny logic-exit mba hikarakara ilay toerana.
Ny logic exit koa dia mifototra amin'ny mari-pamantarana BB ary manidy ny varotra na dia very aza rehefa akaiky ny vidiny na manapaka ny teboka BB mifanohitra. Ity no baiko avy amin'ny BandBreakExit ny parameter izay miasa tsara indrindra amin'ny minus iray hatramin'ny plus iray-roa.
The malalaka BF Scalper EA manana fiarovana miely be - izany dia tena zava-dehibe, satria raha mampiasa fehezin'ny fetra ohatra ianao fa tsy afaka mifehy an'ity, dia manao varotra vitsivitsy miaraka amin'ny 10 na 20 aza ny pips. ny fiantohana tsara indrindra amin'ny karazana varotra ity dia 10-2 pips amin'ny tranga tsara indrindra. Izany no antony tsy ampiasantsika ny baiko fetra.
Fotoana voarafitra: M15
Vondrona paika fanohanana: GBPUSD, EURUSD, EURCHF, EURAUD, GBPCAD, USDCAD, USDCHF ary USDJPY
Ny votoatin'ny default dia natao GBPUSD. Efa nanomana solosaina ho an'ireo paika hafa koa aho. Koa satria tsy afaka mampiditra azy ireo eto aho, azafady, mifandraisa amiko, ary alefako izy ireo.
Ireto misy torohevitra vitsivitsy momba ny optimization:
Aza mampiasa algorithm algorithm
Optimaso 2 parametsa indray mandeha - Isika tsirairay no indray mandeha ary mitady ny sandany lojika indrindra
Mifidiana ho an'ny volana 6 farafahakeliny ary farafahakeliny varotra 200 - izany no faran'izay kely indrindra hisorohana ny fantsom-baravarana ary hahazoana fetran-javatra mety misy, fara fahakeliny, mety hanana tombony amin'ny tena toe-javatra.
Ataovy amin'ny ankamaroan'ny tsingerin'ny optimista 5 ho an'ny marika rehetra
Ampiasao ny dingana optimization lehibe tsara - ohatra raha toa ianao ka manatsara ny fihenan-java-mahomby, ny dingana mety dia mety 5 pips fa tsy 1 pips - eo amin'ny 5% ny haben'ny fanandramana mety tsara amin'ny tarehimarika.
Izahay dia mampiasa testam-panokafana M1 malalaka ho an'ny EAs rehetra - tsara izany.
Izahay dia tsy mampiasa fitsaram-pahaizana raha toa ka tena tsy azo itokisana.
Ary izao ny ampahany mahafinaritra: amin'ny fampiasana an'ity EA ity, dia manaiky ianao fa mahalala ny risika rehetra ary ianao irery no tompon'andraikitra amin'ny valin'ny fanapahan-kevitrao. Tsy ekenay ny tompon'andraikitra na inona na inona amin'ny fatiantoka mivantana na vokam-pifidianana vokatry ny fampiasana an'io vokatra io. Tsara homarihina an'ity lafiny ity, fa ny valin'ny lasa dia tsy voatery hanondro fahitana amin'ny ho avy.
ZAVA-DEHIBE: Tandremo ireo parameter CTHour1-6! Tena manan-danja tokoa izy ireo! Mba hahazoana vokatra tsara, dia tsy maintsy mametraka azy ireo araka ny fanao amin'ny broker GMT Offset ianao. Vakio tsara ny fanazavana eto ambany!
TicksTrade - raha "diso" dia hovonoina ny logic amin'ny fanombohana ny baran'ny M1, raha tsy izany dia hanombatombana sy handanjalanja amin'ny vidin'ny vidiny vaovao.
StealthMode marina / diso - afeno ny fatiantoka ary avelao ny haavon'ny lozam-pampianarana amin'ny famoahana azy ireo ho an'ny mpikarakara. Raha mampiasa an'io fomba io ianao, ny fandefasana ny fihenan-dàlana sy ny mividy ny fampiasana tombony dia tsy ao amin'ny mpikarakara varotra.
EmergencyStopDist - fiarovana faharoa, rehefa mampiasa StealthMode. Ao amin'ny sanda maherin'ny zero, dia manasongadina ny ambaratonga faharoa amin'ny "StopLoss" marina (Emergency) any amin'ny lavitra lavitra noho ilay toerana miafina StopLoss. Amin'ny tranga toy izany, ny sandan'ny hijanonan'ny fiatoana vaovao StopLoss dia ny hamaroan'ny Value EmergencyStopDist plus ny sandan'ny StopLoss miafina.
MinEquity - Fandaniam-bola minitra ilaina ho an'ny varotra.
BandPeriod - Bollinger Bands vanim-potoana.
BandBreakEntry - ny fitrandrahana amin'ny andalana 4-tarehin'ny BB an'ny banky mba hanombohana mpivarotra mifanohitra (mety ho ratsy ny sandany).
BandBreakExit - ny fitrandrahana ao amin'ny 4-tarehimarika amin'ny teboka BB mifanandrify amin'ny fanombohana ny famaranana ny varotra efa misy (mety ho ratsy ny sandany).
UseTrendFilter - Manova izany amin'ny "marina" raha te-handanjalanja fotsiny ianao eo amin'ny fitarihana ny fironana voafaritry ny MA ireto ambany.
MA_Fast_Period - vanim-potoana haingana.
MA_Trend_TF - Timeframe an'ny MAs.
TimeRestriction - raha ny marina dia "marina" izany ka ny EA dia hiasa amin'ny ora rehetra eto ambany. Raha toa ka tsy te hampiasa ny filtration amin'ny fotoana ianao, dia manova ity parameter ity ho "diso".
Parameter manan-danja kokoa
CTHour1 - 6 - seza enina mety ho an'ny ora varotra. Ny valiny 0 - 23 dia mampandeha ny toerana. Ampidiro ny sandany lehibe toy ny 55 mba hamaha ny toerana. Ny valiny tsara indrindra avy amin'ny traikefa azontsika dia tratrarina ao amin'ny 21 sy 22 GMT. Ianao dia tokony hanitsy tanteraka an'io ora io ho an'ny mpikarakara ny mpikarakara ny orinasanao GMT. Ny soatoavina default dia ampiasaina amin'ny GMT + 2 (fotoana ririnina).
WednesdaySwapFilter marina / diso - Ny alimanakan'ny tondron'ny alakamisy dia manafoana ny raharaham-barotra rehetra amin'ny alarobia hariva eo amin'ny làlam-barotra miiba, raha toa ka ratsy kokoa noho ny MaxNegSwapPips ny swap.
MaxNegSwapPips - minus 0.5 ianao dia toa miakatra moramora.
RolloverTimeFilter marina / diso - midira / midina ny sivana mandeha amin'ny sivana.
MinutesBefore - fotoana fohy minitra alohan'ny misasakalina, izay hanafoanana ny asa rehetra varotra.
MinutesAfter - farafaharatsiny isa-minitra aorian'ny misasakalina, izay hanafoanana ny fivarotana varotra rehetra.
x_MaxSpreadFilter - midio / manidina ny fonosana fanivanana fanampiny.
x_MaxSpread - Ampitomboina ny MaxSpread voalohany, izay havela amin'ny ankapobeny, alohan'ny hanafoanana ny asa rehetra. Amin'ny ohatra ohatra, raha 6 sy x_MaxSpread ny MaxSpread dia 2, ny fandefasana ny varotra rehetra dia hofoanana raha toa ka mihoatra ny 6 × 2 = 12 ny andrana.
RecoveryMode - hizara ny fisintonana. Izy io dia miasa rehefa AutoMM> 0.
FixedLots - varotra varotra rehefa AutoMM = 0.
AutoMM - fitantanana vola. Ohatra, AutoMM = 5 dia midika fa ny robot dia hivarotra amin'ny risika 5%.